Linux Networking Training Center in Myanmar — MYSTERY ZILLION
မူလ › Linux/Unix › Linux Server
367 Mobile Devlopment
126 other mobile
Linux Networking Training Center in Myanmar
February 2010 edited June 2010 in Linux Server
Linux Networking သင်တန်းကျောင်းများ အကြောင်း ပြောကြရအောင်ပါ။ ဘယ်သင်တန်းက ကောင်းလဲ။ စျေးဘယ်လိုလဲ။ လက်တွေ့ Practice ကော များများသင်လား အစရှိသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ။ သူများဆီကတစ်ဆင့်သိရတာလေးတွေ ေ၀မျှကြရအောင်ပါ။
Linux ကို စိတ်၀င်စားလို့လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်လည်း အကျိုးများပြီး ဘယ်သင်တန်းကျောင်းက ကောင်းတယ်ဆိုတာလဲ Review လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ပါ။
ဆက်ပါအုံး စိတ်၀င်စားလာပြီ ဒီအကြောင်းပြောမှပြောကြပါ့မလားလို့
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လဲ link လေးဖြစ်ဖြစ်ပေးပေါ့နော်
ကျနော်တို့လိုသင်တန်းတွေမဖွံဖြိုးတဲ့ အေ၀းလူတွေအတွက် လေ့လာချင်ရင်လွယ်ကူအောင်လို့ပါ.....
ဘာမှလည်းဆက်မပြောကြပါလား။ Linux ကိုစိတ်၀င်စားလို ့ပါဗျို ့။ ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲ ?
♪♫....စောင့်ရတာမောပေါ့..♪♫စောင့်ရတာမောပေါ့..♫...ခေါင်းမူးသွားပြီ Linux တဲ့လား...♫
Linux မှာက ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ Linux Lab လောက်ပဲ သိတယ်။ ကျန်တာတော့ မသိပါ။ ဒါပေမယ့် အကုန်ရှာဖတ်လို့ လွယ်ပါတယ်။ သင်တန်း တကူးတက တတ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်တော့ ရှိဖို့လိုတာပေါ့။ Linux က community ကောင်းတဲ့အတွက် ကိုယ်သိချင်တာတွေကို မေးဖို့လွယ်သလို googling လုပ်ရင်လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဖြေတွေကို ရတတ်ပါတယ်။ သင်တန်းကတော့ မပြောတတ်ပေ။
March 2010 edited March 2010 Moderators
networking ပိုင်းလောက်မလုပ်ဖူးဆိုရင် သင်တန်းတက်စရာမလိုပါဘူး ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါ
ဒီလိုပဲ စမ်းသုံးရင်းနဲ ့တက်သွားကြတာပါ အဓိကကတော့ လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိဖို ့ပါပဲ
ဒါပေမယ့် ကိုစေတန်ပြောသလို အင်တာနက်ရှိဖို ့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ
MZ ကနေပဲ Red Hat Linux ebook မြန်မာဗားရှင်းလေးတစ်ခု download ယူဖူးတယ်။ install လုပ်တာကစပြီး အများကြီးပဲ။ ကျနော်တောင် print ထုတ်ထားလိုက်သေးတယ်။
လင့်ကိုမမှတ်မိတော့လို့ ... သိတင်သူတွေပြန်တင်ပေးပါဦး။
အဲစာအုပ်လေးဖတ်ရင်းလုပ်ရင် သင်တန်းဖိုး ၆၀၀၀၀ လောက်တော့သက်သာသွားမှာပါ ....
ကျနော်ထင်တာကတော့ အင်တာနက်ကရှာမဖတ်ခင် နားလည်တဲ့တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာ သူ့ သီအိုရီတွေ နောက် basic ပိုင်းလောက်တော့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ linux ကနားမလည်တဲ့သူတွေဖတ်ရင် ဘာမှန်းသိမှာဟူတ်ဘူး
ဟီး အဲဒါကြောင့် linux lab လောက်မှာ basic လောက်သွားတက်လိုက်ပြီးရင် ကျန်တာ ဆက်လေ့လာလို့ရပါတယ်
နောက်မသိရင် လဲ အဲဒီက ဆရာတွေကိုထပ်ထပ်ပြီး တွားမေးလို့ရတယ်ဗျ
ဆရာ ၀ီလျှံက သဘောကောင်းပါတယ်ဟီးးး
ရေးတာ အမှားများပါရင် ခွေးလွှတ့်ပေးပါခင်ဗျာ
တော်ပေါ်သားလဲ ဒီအတိုင်ပဲထင်ပါတယ်..... linux က user အသစ်တယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး..
ရန်ကုန် UCSY လှိုင်ကျောင်းဝန်းထဲတွင်ဖွင့်သော .. japan (JICA) အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး software develoment ရယ် networking ရယ်ဖွင့်ထားတာ ကြာပါပြီ .. သင်တန်း နှစ်ခုလုံး Suse Linux နဲ့ ပဲ သင်ကြတာပါ .. အဲဒီမှာဆို ကို opengun သိချင်တဲ့ linux networking တော်တော် များများ သိရပါလိမ်မယ် .. ဂျန်ပန်တွေ က networking တော်တော် ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ် ... သင်တန်းကြေးက တစ်သိန်းခွဲထင်ပါတယ် .. ၂၂ ပတ်သင်တန်းပါ .. ဝင်ခွင့်ဖြေရပါတယ် .. BE(IT) , ME(IT),B.C.Sc,B.C.Tech,M.C.Sc,M.C.Tech ရပြီးသားတွေ ဝင်ခွင့်ဖြေပြီး တက်ရပါတယ် ... အသေးစိတ်ကိုတော့ အဲဒီ လှိုင်ကျောင်းဝန်းထဲသာ သွားစုံးစမ်းပါ ခင်ဗျာ ...
ကို စေတန်ေ၇ ကျွန်တော် ubuntu သုံးတာပါ။ နက်ေ၀ါ့ကနေ ရှယ်ယာတွေလှမ်းခေါ်ကြည့်တာမရဘူးဗျ။ ဘယ်လို setting ပြင်၇မလဲ။ windows ဖက်က data ကိုလှမ်းဆွဲချင်တာ။ အရင်ကချတော့၇တယ် ခုက တွေ့ကိုမတွေ့တော့တာ။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ ကျွန်တော့်စက်ကိုတွေ့တယ်။ access လုပ်လို့မ၇တော့ဘူး။အခု။ ကူညီပါအုံး။ :frown::frown::frown:
ဟုတ်ကဲ့ ထောက်ခံပါတယ် တက်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀င်ခွင့်ဖြေရပါမယ် သိပ်တော့အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး data com ရယ် TCP/IP အခြေခံလောက်ဆိုရင်ရပါပြီ
ဘွဲ့ကတော့ သိပ်ပြီး crazy မဖြစ်ပါဘူး တခြားဘွဲ့တွေဆိုလည်း ဆရာမတွေ ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် ရပါတယ် အဓိကတော့ စာလိုက်နိုင်ဖို့ပါဘဲ
subject တွေကတော့ လန်းတယ်ဗျ တက်ကြည့်ပါ ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်
မှတ်ချက် linux ကို crazy ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရအောင်တက်သင့်ပါတယ် :cool:
တာယာပွကြီး wrote: »
ဂျက်ကာ ကဒီနှစ်ဖွင့်သေးလို ့လား ??? ကျွန်တော်တွေ ့တာကတော့ နှစ်တိုင်း အပြိုင် အိန္ဒီယ (IMCELTS) နဲ့Japan ( ၇ျက်ကာ အင်္ဂလိပ်လို ့မမှတ်မိလို ့ပါ :P ) တွေ ့ပေမယ့် ဒီနှစ်တော့မတွေ ့မိဘူး ကြားတာကတော့ အဖွားကြီးနဲ ့ဂျပန် နဲံ ့ကမတည့်လို့မဖွင်တော့ဘူးလို ့တောင်ကြားတယ်
သေတော့မသေချာပါဘူး အသေးစိတ်ကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ www.ucsy.edu.mm မှာဖတ်နိုင်ပါတယ် ညွန်းသာညွန်းရတာပါ အဲဒီ ဆိုဒ်က ခြောက်လနေမှ တခါလောက် update လုပ်တာ :P
မဖွင့်တော့ဘူးတော့ မကြားမိဘူး ဗျ .. . JICA နဲ့ စာချုပ်တော့ ကုန်သွားပြီပြောတယ် .. နောက်ထပ် နှစ် နှစ် ထပ်ချုပ်ဖြစ်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့ ဗျာ ... ထပ်မချုပ်ဖြစ်ရင် .. ဒီနှစ်ဆို ပြီးပြီထင်တာပဲ ခင်ဗျာ ... ပြောရင်း အကြောင်းအရာလွဲ သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ် (networking training ကနေ) ဟိဟိ ..
သင်တန်းက ဖွင့်တုန်းပါဘဲ course တွေတောင် ထပ်တိုးလာတယ်
လောလောဆယ်ဆယ် phase7ရောက်နေပြီ တက်ချင်တယ်ဆိုရင် ၁၀ လပိုင်းလောက်မှာ ၀င့်ခွင့်ဖြေရမယ်ထင်တယ်
course အသစ်တွေက advance တွေဆိုတော့ သင်တန်းအောင်မှ တက်လို့ရမှာ